Akukho namnye ngo-2021 owaya ngaphaya koPhezulu njengoJared Leto - Iimuvi
Akukho namnye ngo-2021 owaya ngaphaya koPhezulu njengoJared Leto
Ukuba ufunda nantoni na kule veki, yenze i New Yorker Iprofayile kaJeremy Strong , apho i-Emmy-yokuphumelela Ukulandelelana i-thespian ijonga zonke iistereotype ezingalunganga zeNdlela esebenzayo. U-Strong uyala ukuqhelisela imiboniso kunye neyakhe Ukulandelelana costars kuba ayihambelani nenkqubo yakhe; ucele ukuba afakwe i-tear-gass kwisethi ye Uvavanyo lwaseChicago 7 ; wade wenza isithunzi somntu osebenza ngezandla ukulungiselela indima yakhe njengeplumberhi kwifilimu ezayo kaJames Grey Ixesha leArmagedon . (Kwakhona wenza ukuba uYale ahlawule imali eninzi kakhulu ukuze akwazi ukuhlala kunye no-Al Pacino xa wayengumfundi, oko, ngokungafihlisiyo, kukusetyenziswa okumangalisayo kweemali ze-Ivy League.) Ngayo yonke i-anecdote, kuyacaca ngakumbi ukuba i-Strong ibini. Unyanisekile kwiinkolelo zakhe kunye nokuba angakhathali ukuba ingaba i-schtick yakhe inokuba njani kuye nabani na okufutshane naye: i-cocktail ye-tragicomic eqinisekisa ukuba ungoyena mntu ufanelekileyo ukuzisa u-Kendall Roy ebomini. Kodwa ngelixa u-Strong ezijonga njengolandela isithethe esikhulu sesithixo sakhe esibambeleyo, uDaniel Day-Lewis, ukuziphatha kwakhe kusizisa engqondweni yomntu obonakala kakhulu: uJared Leto.
Njengonamandla kunye ne-DDL, uLeto ubhalisa kubugcisa be Indlela yokwenza , ukuhlala kwisimilo ixesha elide lemveliso. Kodwa ukuhlala emntwini yinto enye-uLeto ubonakala ekhetha ezona ndima zigqithileyo ngokukodwa ukuze angakwazi ukunyamezeleka. Cinga ngee-antics zakhe ezibhalwe kakuhle ngo-2016 Iqela lokuzibulala : Ngelinge lokungena kwingqondo yeJoker, umntu okhohlakeleyo owathi waphila ngaphambili nguJack Nicholson kunye ne-Oscar-winning Heath Ledger, ULeto wathumela iimpuku, iikhondom ezisetyenzisiweyo, kunye namaso ezimpundu kubahlobo bakhe. (Ngobulumko wayekhuphele ngaphandle i-costar uViola Davis kule migilingwane, ekubeni wayeya kubaleka ngokubulala.) Konke oku kwakusenkonzweni yentsebenzo ephantsi eyathatha imizuzu ye-15-odd kwifilimu ehlambalazayo.
Ewe, into yokuba uLeto uphumelele iOscar-ngenceba yakhe ukusebenza impikiswano njengomfazi we-transgender kwi Dallas Buyers Club -unika indlela yakhe yokuziphatha kwinqanaba elithile lokukhuseleka. Ayinamsebenzi nokuba unoxanduva lolona phawu lubi lwesikrini seJoker okanye ezona mboniso zibalaseleyo ngendlela ebalaseleyo. I-Blade Runner 2049 , ULeto unomnombo wodumo oqinisekisa ukuba uya kuba ngumdlali weHollywood kwikamva elibonakalayo.
Incwadi yokudlala kaLeto ayizange itshintshe ngo-2021, ngexesha awayedlala ngalo umrhanelwa obulalayo ( Izinto ezincinci ) kunye nokungaphumeleli kobukhosi befashoni ( Indlu yeGucci ), kwaye wayiphinda ngokufutshane indima yakhe njengoJoker ( UMbutho wezoBulungisa kaZack Snyder ). Kodwa okwesihlandlo sokuqala, uLeto wabonakala esebenzisa le midlalo ukuze athembele kwimvelo yakhe njenge-troll ngaphandle, uyazi, efuna ukuthumela amaso ezimpundu emntwini. Ekugqibeleni uziva ngathi ungaphakathi kwi-joke kune-butt enye. Unyaka kaLeto kwiimuvi umguqule kumdlali wonke umntu othanda ukuzonda kumdlali wonke umntu othiyileyo kodwa nangona kunjalo uyakuthanda ukubukela.
Ukugqithisa Okubi: I-So-Bad-Yimbi 'iNdlu yeGucci'
‘Izinto Ezincinane’ Zivela Kwelinye Ixesha
ILeto's all-out 2021 yaqala ngayo Izinto ezincinci , i-neo-noir thriller enokufana ngokwaneleyo Se7en ukuba umlawuli wayo, uJohn Lee Hancock, kwafuneka agxininise kudliwano-ndlebe ukuba iskripthi saqulunqwa phambi kwefilimu kaDavid Fincher. Ukugcina uthelekiso luqhubeka, uLeto kuku Izinto ezincinci yintoni na uKevin Spacey Se7en . Iifilimu ezimbini zihluke kwi-Spacey's John Doe isungulwe njengombulali we-serial ngelixa u-Leto Albert Sparma egcina amakhadi akhe kufuphi ne-vest. Ngaba u-Sparma unoxanduva lokubulala ngenkohlakalo kulo lonke elase-Los Angeles, okanye ngaba ulixhoba lolwaphulo-mthetho elingaqhelekanga elineskena samapolisa esibopha amagosa amabini kuba ukusondela kuphando lwexesha lokwenyani kuyamvuyisa?
Imincili yentsebenzo kaLeto ibotshelelwe kwindlela imuvi egcina ngayo ukuba netyala komlinganiswa wakhe. Ingathi Izinto ezincinci wasasaza umoya womlingiswa kaLeto: egculela abaphulaphuli ngokwenza ukuba uSparma abonakale eyoyikeka ngokobuntu ngaphandle kokumfaka ukubulala. (Ikwanceda ukuba ifilimu ibe noRami Malek, osandul' ukuvela Ujiko olubi kakhulu kwihotele yentengiso yaseMandarin Oriental , ukudlala umcuphi olilungisa kunye nosapho olunothando kweyona mpazamo imangalisayo yonyaka-ndandilindele ngokwenene ukuba i-twist ibe yileyo yena wayengumbulali.) Kwaye, inkwenkwe , thetha malunga ne-creepy: Yonke into esinokuyifumanisa ngayo nge-Sparma kukuba (a) uchitha iiyure zexesha lakhe lokukhulula kwiiklabhu ze-strip, (b) uneenwele ezigcoba ngaphezu kwe-1988 Ford Taurus, kwaye (c) uyala uShirley Temples ukuba suka kwiindawo zokuntywila phambi kokuba uwangawangise kubacuphi njengomfana otyhale umzimba ofileyo kwinqwelo yemoto yakhe:
Ngaphandle kokuqhayisa abadlali abathathu abaphumelele i-Oscar eDenzel Washington, uMalek, naseLeto, Izinto ezincinci khange ikhuphe imbonakalo yemagnethi yexesha lebhaso-nangaphambi kophononongo oluphakathi lufakwe kwi-equation. Kodwa umsebenzi kaLeto obekekileyo awukhange ubonakale, njengoko wafumana iwonga leGolden Globe kangangokuba nomdlali weqonga wavuma ukuba ndothuke kakhulu malunga. Ngelixa uLeto engakhange ongeze igama lesibini le-Oscar kwi-CV yakhe, into yokuba yayiyinto enokwenzeka ithetha ngendlela abavoti abadla ngokuzifumana betsalelekile ngayo. uninzi ukwenza, endaweni yokwenza okona kulungileyo. Kwaye kungcono okanye kubi, ukusebenza kukaLeto ku Izinto ezincinci waye right kwi wheelhouse ye Academy.
Kuyavunywa, nayiphi na ingxoxo kaJared Leto Ukwenza iNkosana yoLwaphulo-mthetho ayigqibekanga ngaphandle kweJoker, kwaye ngelixa i-DC Extended Universe iye yahamba ngolonwabo ukusuka ekutolikeni kwakhe iNkosana yoLwaphulo-mthetho, uZack Snyder akakwazanga ukumelana nokongeza i-villain. ukuzingca kwakhe (kodwa uhlobo olumangalisayo? ) I-superhero opus eyaziwa ngokuba yi-Snyder Cut. Kwimeko yokuphela kwenguqulo yeeyure ezine ze Justice League engazange ifotwe ngaphambili, uBatman (uBen Affleck) uphupha ngekamva eliyinkangala apho uloyiko lwakhe olukhulu-uSuperman lophula kakubi-luza kuzaliseka. Amanye amaqhawe e-DC kunye nama-villains kufuneka ahlangane notshaba oluqhelekileyo, oku kuthetha ukuba uBatman kunye noJoker bakwiqela elifanayo. Kodwa oko akuthethi ukuba kufuneka bahlangane.
Kumboniso wabo omfutshane kunye, iJoker ihlekisa ngoBatman-yintoni enye into entsha?-owisa ibhombu ka-F kutshaba lwakhe. Kodwa ngelixa uBatman ethetha igama elibi ebambe izihloko ezininzi, eyona ndawo inomdla kaLeto's cameo yinto engekhoyo kuyo. Ngokungathi abaphulaphuli bebengekadinwa nguLeto's schtick, i-trailer ye-Snyder Cut ibandakanya i-Joker ethi. sihlala kuluntu, Isalathiso kwi-meme ehlala ihleli isoloko ichazwa ngendlela engafanelekanga kumlinganiswa we-anarchic. Ukuba neJoker kaLeto ithi sihlala kuluntu bekuya kuba yi-DCEU elingana ne-Deadpool eqhekeza udonga lwesine-yeye, umlingisi nje. i-ad-libbed umgca yetreyila. Yinkohliso esebenzayo ekruqulayo ngenxa yendlela enokwenzeka ngayo ukuba i-platitude engenanto ivakala iphuma emlonyeni wakhe; khumbula, le ndoda yakha yacaphula uFrederick Douglass ecaleni ifoto yakhe ejongeka kakhulu . Kodwa ngokungatshongo umgca kwifilimu-kunye ne-tweeting njenge-troll-uLeto ubonise inqanaba elingazange libonwe ngaphambili lokuzazi kunye nokuzithoba. Ayikuthetheleli ukujika kwakhe ngenye indlela njengoJoker, kodwa ubuncinci kufuneka athi ndlelantle kumlinganiswa ngokwemigaqo efanelekileyo (ecaphukisayo).
abaphumeleleyo kakhulu kumdlalo we-nba
— UJARED LETO (@JaredLeto) NgoFebruwari 14, 2021
U-Leto uvale isiphithiphithi sakhe ngo-2021 ngomboniso bhanyabhanya wakhe omnye osuka kulo nyaka wawuyinjineli ye-Oscar buzz: Iqonga lefashoni likaRidley Scott. Indlu yeGucci . Kwifilimu, uLeto udlala uPaolo Gucci, i-failson paunchy ka-Aldo Gucci (Al Pacino), ojongene nobukhosi beentsapho. Njengomlingiswa, uPaolo ufanele ukuba yintsini ye-famiglia: umntu ongenalo iliso lomyili kungakhathaliseki ukuba uzama kangakanani. (Into efunekayo kukujonga isuti yakhe emfusa yecorduroy ukwazi ukuba uPaolo unamandla anzulu kaConnor Roy.)
Njengomdlali, nangona kunjalo, uLeto akaphumeleli: Kwifilimu ebonisa uAdam Driver, uLady Gaga, uPacino, uJeremy Irons, kunye noSalma Hayek, ubalasele. ULeto ngoyena mdlali ucofa kakhulu ukuba ithowuni yakhe Indlu yeGucci kufuneka: a Uthixo I-parody eqaqambileyo njengemigca yefashoni yeGucci. Ngelixa uLady Gaga wamsebenzisa IsiTaliyane-eso-isandi-esingaqhelekanga-intetho yesiRashiya kwiinyanga ezilithoba kwaye ii-Irons azikhathazi ngokutshintshela ngaphandle kweBritane yakhe yokuzalwa, uLeto usebenzisa i-singsong-y affectation-Basenokujonga-afana, kodwa banambitha-yahluke kakhulu, uPaolo uthi malunga nekaka kunye itshokolethi -oko kuvakala njengophicotho olwandisiweyo endaweni kaChris Pratt kwimuvi entsha yeSuper Mario. (Ukuba kucace: Yena kufanele endaweni kaChris Pratt.)
Umsebenzi kaLeto njengoPaolo kunzima ukuwuchaza njengento elungileyo okanye embi. Ingaphezulu kwe-vibe. Ungaphuma uhambe Indlu yeGucci ukufuna ukumisa umfanekiso oqingqiweyo ngembeko okanye ukwenza umboniso i Huey Lewis kunye News scene ukusuka Psycho yaseMelika . Andizukuyibamba kuye nabani na ofumanise ukuba intsebenzo idiniwe, kodwa emva kweminyaka encoma ubuhle beNdlela esebenza kwiziphumo ezicaphukisayo, kuyahlaziya ukubona uLeto ehlekisa ngaye. Yena wachaza ukubuyisela uPaolo ebomini njengokuzalisa ibhola ye-bowling ephuma kwi-sphincter yam kwaye uye wabanga ukuba wayekhupha imigca ye-arrabbiata sauce, enika zombini umlingiswa kunye nefilimu inqanaba lokubaluleka okulifaneleyo-oko kukuthi, akukho nanye.
Akuzukuthatha xesha lide ngaphambi kokuba uLeto aphinde abonise izikrini zethu kwakhona-ulungele ukudlala iMarvel's vampiric antihero Morbius kwifilimu ebizwa ngokuba nguSony kwinyanga ezayo. Ibha iphantsi Morbius , engenamoya we Indoda yesigcawu okanye ubuqhophololo (kunye neempondo) ze Ityhefu . Kodwa ukuba uLeto uzisa nesiqingatha samandla e-manic kuMorbius awawenzela iindima zakhe zefilimu ngo-2021, ababukeli bhanyabhanya baya kufumana unyango. Ukuqhubela phambili, nantoni na engaphantsi kwe-over-the-top Jared Leto ukusebenza kuya kwenza make-a me lusizi .
akukho mnyama kumashumi amathathu ohlaselo
ilokhi yonyawo ibhola lonzo yebhola
Abadlali abaphumeleleyo kumdlalo kaPaul
troy aikman gay?
denzel washington king kong quote
darren morgan x iifayile
umcimbi ophakamileyo uyawubona